Batteriga OnePlus 6 dhaqso ayuu u baxayaa | Androidsis
Cusboonaysiinta ugu dambaysa waxay dhibaatooyinka batteriga siisaa OnePlus 6
Eder Ferreño | | Batariga, Mobiles, OnePlus
Haddii dhowr toddobaad ka hor ay dhibaato ka jirtay bootloader, hadda waa isbeddelka dhibaatada cusub ee OnePlus 6. Heerka sare ee sumcadda Shiinaha ayaa maalmahan loo cusbooneysiiyay OxygenOS 5.1.8. Kani waa nooca cusub ee lakabaynta qaabeynta moodooyinka shirkadda. Laakiin waxay u muuqataa in cusbooneysiintu aysan si fiican ula fadhiyin dhamaadka-dhamaadka. Maadaama dhibaatooyin ka jiraan batterigaaga.
Isticmaalayaasha OnePlus 6 ee u cusbooneysiiyay OxygenOS 5.1.8 waxay la kulmayaan dhibaato dhib leh. Taasina waa in batteriga qalabku uu ka dhaqso badan yahay sida caadiga ah. Wax dhacaya kadib helitaanka cusboonaysiinta.
Qaybta wanaagsan ayaa ah Waxay umuuqataa in tani aysan aheyn guuldaraysi saameyneysa dhammaan isticmaaleyaasha leh dhamaadka-sare. Laakiin waxaa jira dad badan oo adeegsadayaal ah oo ay saameysay qaladkan. Dhammaantood waxay bilaabeen inay la dhibaatoodaan dhibaatada ka dib cusbooneysiinta.
Ma jiro wax badan oo qarsoodi ah oo ku saabsan arrintan. Dhibaatadu way cadahay, Batariga OnePlus 6 si dhakhso leh ayuu u daadanayaa. Waxay hoos ugu dhacdaa si ka dhakhso badan sidii caadiga ahayd. Waxyaabo abuuray walaac iyo xanaaq ka dhex jira isticmaaleyaasha leh dhamaadka-sare ee sumadda Shiinaha.
Xilligan sumadda lafteeda kama jawaabin eedeymahan. In kasta oo ay yihiin eedeymo run ah, maadaama ay jiraan isticmaaleyaal badan oo iska leh OnePlus 6 ay saameysay. Laakiin waxaan rajeyneynaa inay wax dhihi doonaan oo ay garwaaqsan doonaan fashilka si dhakhso leh. Ma ahan waqti dheer in la barto wax badan.
Dhanka kale, maxaaSug xalka in loo sii daayo dadka isticmaala OnePlus 6 taas oo ay saameysay fashilka. Waqtigan xaadirka ah tirada saxda ah ee isticmaaleyaasha uu saameynayo batterigan si dhaqso leh uga baxayo lama oga, laakiin waxaa macquul ah inay xitaa ka sii badato maalmahan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Cusboonaysiinta ugu dambaysa waxay dhibaatooyinka batteriga siisaa OnePlus 6
Waxa intaa dheer soo degsashada si ka dhakhso badan sidii caadiga ahayd, waxay ku kululaataa geedi socodka lacag-bixinta iyo goorta la isticmaalayo wakhti dheer oo shaashadda firfircoon.
Luis T. dijo
Shalay waxaan cusbooneysiiyay Android 10 iyo Oxigen OS 10.3.0 oo ah Midkeyga oo lagu daro 6 batteriguna aad ayuu u kululaa wuuna dhammeeyaa 60% si ka dhaqso badan sidii caadiga ahayd. Fadlan caawintaada si aad uga laabato cusbooneysiintaas. Mahadsanid
Jawaab Luis T.
Microsoft Edge for Android waxaa lagala degay shan milyan oo jeer
Samsung ma gaari doono bartilmaameedkeeda iibka ee 2018